Ukuklama izinto zangaphakathi zokuhlala zanamuhla Izakhiwo zangaphakathi zendawo yokuhlala Bucharest Constanta - Nobili Umklamo wangaphakathi, studio, umklami, umklami, izinkampani, ukuklama, amanani
Izakhiwo zangaphakathi zendawo zokwakha izindlu - Design design style classrooms
Esigabeni sephothifoliyo bakhethwa imiklamo engcono kakhulu yokuklama izindlu zezindlu ezenziwe yi-Nobili Interior Design. Lapho sisebenzisa izinhlelo zokwakha, abaqambi bethu bahlaziya ngokucophelela imicabango nemizwa evezwe yiklayenti. Imiklamo elandelayo yokwakha yangaphakathi yikhasi lethu lebhizinisi, elisimele ngaphezu kwanoma yimuphi umbhalo obhaliwe namagama.
Imiklamo yangaphakathi yeConstanta
Isakhiwo sangaphakathi sesimanje iBucharest
Imiklamo yangaphakathi yezindlu 3 Constanta amakamelo
Igumbi lokuphila elingaphakathi lokuklama ngaphakathi
Igumbi lokuhlala ngaphakathi
Izakhiwo zangaphakathi zihlala efulethini eliphezulu
Imiklamo yangaphakathi I-4 yangaphakathi ikwakhiwa amakamelo anamuhla
Imiklamo yangaphakathi indlu yezingxenye ze-4
Igumbi lokungaphakathi lokugumbana ikamelo le-3
Uma uhlela indlu, kubalulekile ukucabanga ngokuklama zonke izikhala ukuze uthole induduzo enkulu endaweni esincane. Ngaphezu kwalokho, ingaphakathi lamakamelo kufanele ivumelane futhi ngesikhathi esifanayo isebenze futhi ikhululekile. Ngalesi sizathu ukuklanywa komklamo wangaphakathi wekamelo le-3 noma le-3 kuzogcwaliseka. Ungabuka imiklamo yokwakha yangaphakathi eyenziwe yinkampani yethu yama-classic, izitayela zesimanje zendawo eConstanta, iBucharest, Brasov, Ploiesti. Umqondo wokwakhiwa kwangaphakathi kwendawo yokuhlala kungenziwa ngababili abaklami kanye nabaqambi bangaphakathi bezobuchwepheshe. Into eyinhloko akumele ilahlekelwe imininingwane emincane kunazo zonke eyenza umehluko phakathi komklamo wangaphakathi ophumelelayo nomklamo wokwenza isilinganiso. Iprojekthi yangaphakathi yokwakha yefulethi incike ekutheni ubukhulu nokutholakala kwendawo ephilayo. Izindlu ezimbili noma ezintathu zokulala zihlanganisa amaphrojekthi ahlukene ngokuphelele. Njengomthetho, ifulethi lihlotshiswe ngemibala ekhanyayo ngokubonakalayo ilula phezulu kwamakamelo. Ukuba khona kwamakamelo amabili okulala endlini kuvumela inhlangano ekhululekile kakhulu yezindawo ezibalulekile zokusebenza. Ngokuvamile igumbi linikezelwe ekamelweni lokuphumula kanye nakho konke okumele kulala ekamelweni. Ngendlela, igumbi lokuphumula lingenziwa lihlanganiswe nehhovisi ngoba lingenalo indawo enkulu. Abanikazi bezindlu zokulala ezintathu bahlala benenhlanhla, ngoba bayakwazi ukubona noma yikuphi umqondo wokwakha ngaphakathi. Indawo ephilayo ikuvumela ukuhlobisa indlu ngefenisha, izesekeli nezinye izakhi zangaphakathi ngenkathi uhlonipha umqondo oyifunayo we-stylistic. Igumbi ngalinye lingakhiwa ngendlela ehlukile noma singakwazi ukuhlela indlu efana nesitayela esifanayo. Emagumbini amathathu ekamelweni eliphezulu, amahholo alula kakhulu, kodwa le nkinga ingasuswa ngokubonakalayo ngokusebenzisa izinto zokuqeda kanye nezici ezifanele zokuhlobisa. I-Indiferenet enendawo yokuhlala eGalatia, Braila, Tulcea noma eBacau, eSuavaava, Iasi, uBuzau sinemiqondo kanye nezixazululo ezisebenzayo kunoma yisiphi isitayela sokwakha esivumelwane yiklayenti. Ukuze uthole imininingwane emayelana nezinsizakalo zokwakha zangaphakathi zangasese kanye namanani entengo sicela uvakashele isigaba seNkonzo intengo yomklamo wangaphakathi .
Isigaba sephrojekthi ingaphakathi lokuklama izindlu